Sidee si buuxda u masixi card SD telefoonka Android
1 masax Android Phone
2 masax Android Tablet
3 Android guud masixi
4 Ha ogolaan in Android fog
5 Top Android tirtirayaasha
6 Top Android Adda
Card 7 masixi Android SD
8 masixi Android Taariikhda
9 Delete Android Message
Haddii aad rabto in aad iibiso telefoonka aad Android ama aad rabto in aad ka soo siiyo, waxaa lagama maarmaan ah in aad masixi card SD aad. Tan waxa ku jira faylasha aad shakhsiyeed iyo macluumaadka, waxaa tirtiro kaa caawin doona inaad ilaaliso arimahaaga gaarka ah. Tirtiro card SD aad la samayn karaa siyaabo kala duwan, oo aad si toos ah uga telefoonka aad Android marna masixi karin, waxaad adeegsan kartaa si gaar ah loogu Softwares in masixi card SD ah oo aad si fudud u gelin karaa kaarka SD ee your computer oo qaab. Xaaladaha intooda badan, cadaymihii la software waa xalka ugu wanaagsan sida waxa loogu talagalay in lagu sameeyo. Tirtiro si toos ah uga telefoonka Android habka ugu fiican ee masixi card SD tan iyo aad halis u badiyay macluumaad kale oo ku kaydsan xasuusta telefoonka aad sida xiriirada, fariimaha, qoraalo, iwm In this article ma aha, waxaan ku tusi doonaa sida loo masixi card SD aad telefoonka Android oo sidoo kale waxaan u soo jeedin doonaa qaar ka mid ah codsiyada aad isticmaali karto si loo maareeyo masixi iyo kaararka SD aad gacanta. Waxaa la tagay si aad u doorato mid ka mid ah in adiga kuu fiican.
Hagaha si buuxda u masixi card SD phone Android
Tirtiro kaarka SD Android lagu gaari karaa midig ka qalab Android goobaha hidi aan isticmaalin wax codsiga xisbiga saddexaad. Haddii aad rabto, waxa kale oo aad isticmaali kartaa arji xisbiga saddexaad si loo gaaro natiijada isla ama natiijada ka sii fiican had iyo jeer. Kuwani codsiyada xisbiga saddexaad waa labada la heli karo sida codsiyada Android iyo software u Windows ama Mac. Waxa aad dooran gabi ahaanba ku xiran tahay in aad on iyo sida aad u rabto in aad ku saabsan.
Waxaan qaadan doonaa eegno sida ay u masixi card SD ku aalad Android isticmaalaya goob hidi ee telefoonka. Si fudud raac tallaabooyinka sida hoos ku siiyo.
Talaabada 1: goobaha Open app ka menu in ay "Kaydinta"
Talaabada 2: hoos ugu hooseysa oo ka jaftaa "SD Qaabka Card"
Haddii aad ka bixinayso telefoonka Android ama iibinta telefoonka, waxaa fiican haddii aad Factory celi telefoonka. Tani tirtiro wax walba oo ku saabsan telefoonka iyo jirsado goobaha sidii ay ahayd markii aad soo iibsatay dib. Tani waxay sidoo kale waa hab waaweyn ee ilaalinta gaarka ah, sababtoo ah waxaa tirtiro aad xiriirada oo dhan, emails, fariimaha, qoraalo, iyo macluumaad shakhsi telefoonka kasta oo kale.
Top 3 Android maamulka card SD iyo barnaamijyadooda tirtiro
Waxaa jira dad badan software waxaa kaa caawin kara in aad maamuli kaarka qalab iyo SD Android, laakiin hadana in yar oo iyaga ka mid ah waa weyn. Halkan waxaa ku qoran liiska 3 hogaanka maamulka Android kaadhka SD iyo barnaamijyadooda tirtiro in aad ka heli karto suuqa maanta. Waxaan ku talinaynaa in aad iyaga oo dhan waa inuu isku dayaa iyo eekaan mid ka mid ah in ugu fiican ee aad u. Liiskani waa la diyaariyey si aan doorashada oo si fiican ee ay 3 waxaa ku qoran marka hore iyo wixii la mid ah. Aan iska hubi.
Airdroid waa codsi ah in oggolaanaysa in aad maamulato qalab Android aad hab wax ku ool ah, iyo in sidoo kale si toos ah u isticmaalaya browser internetka ah, oo aan baahida loo qabo isku xira qalabka si cable USB ah. Waxay leedahay waxyaalo badan oo faa'iido leh oo kale oo ka dhigaya taagan iyo kuwo kale in this category.
Copy files iyo diraan farriimaha
View wac abuse, xiriirada iyo farriimaha
Kala iibsiga file Easy ka PC in qalab Android ama bilcaksii.
Fursada aad xaq u farriin qoraal ah ka your computer diro.
Waxa laga heli karaa Windows, Mac, iyo sida codsiga Web ah.
Non-daakhilaad halka muujinaya farriimaha.
Wirelessly isku xira in aad PC si ay nuqul ka faylasha, u akhri, diro fariimaha qoraalka ah, iyo app updates.
Isticmaalka RAM Sare xitaa marka aan isticmaalayo software Airdroid ah.
Auto billaabataa marka aad kabaha daaqadaha, oon ku keenaya OS si tartiib kabaha.
Si toos ah syncs si casriga ah, haddii ay tahay in kala duwan ee shabakada wireless.
Waa codsi free kuu oggolaanaysa in qalab Android aad kuugu xiriiriyo your computer labada via cable USB ah iyo in ka badan oo xidhiidh WiFi ah. Waxaad u isticmaali kartaa si hufan u maamuli lahaayeen barnaamijyadooda ku qalab aad iyo socdo macluumaadka nidaamka iyo sidoo. Guud ahaan, waa wax soo saarka weyn u leedahay iyo u isticmaal maamulka qalab Android.
Kuu ogolaanaya inaad si hagaagsan xiriirada, hawlaha, jadwalka taariikhda, qoraalo, iyo xusuusinta u dhexeeya qalabka Android iyo Outlook.
Kuu ogolaanayaa fayl Muuqaalka iyo qaybaha syncing sidoo.
Chine nidaameed, photos, music, iyo xataa videos u dhexeeya qalabka Android iyo PC.
Sidoo kale taageertaa USB iyo WiFi xiriir ka dhexeeya qalab Android iyo PC.
Muuqaalka waxtar leh synchronizer Android.
Waafajinta, ku daro ama wax xog gurmad.
User Interface Functional.
Wareejinta xogta u dhexeeya aad drives computer maxalliga ah iyo telefoonka aad Android.
Isticmaalka RAM Sare xitaa marka aan isticmaalayo software Mobisynapse ah.
Version freeware ma taageeri syncing si toos ah iyada oo Wi-Fi oo USB.
MOBILedit waa aalad kale oo weyn kuu ogolaanaya inaad si ay u maareeyaan qalab Android aad adiga oo isticmaaleya isticmaale PC. Xaqiiqdu waxay tahay in ay tahay la jaan qaada nooc kasta oo telefoonka gacanta si haddii loo baahdo aad sidoo kale ma ahan oo keliya mid ka mid ah Android isticmaali kartaa qalabka kale ee aad. MOBILedit sidoo kale ku xidhi aad telefoon si aad PC via cable USB iyo WiFi labadaba.
Connects qalab si PC via USB, Wi-Fi oo Bluetooth.
Si toos ah u hagaagsan files warbaahinta, liiska xiriirada, entries taariikheed, iyo fariimaha SMS.
Ku haboon u heli files si joogto ah loo isticmaalo.
Si fudud u maareeyaan xogta aad Android ka PC.
Wareejinta xogta iyo ka qalab Android.
U ogolow in aad xiri iPhone iyo Android iyada oo Wi-Fi.
Taageerada hawlaha fariimaha kala duwan ee ka soo, hesho, archive, raadinta iyo fariimaha qoraalka far.
Waxaad u cusbooneysiin karaa oo kaliya macluumaadka telefoonka ee PC.
Waa qaali ah.
No Download Centre.
Bedelka Content ka iPhone in Android
Top 10 Android Desktop Maareeyayaasha
Update Manager Android inay Hel Performance Better
Transfer File USB Android
Tababare 7 Android Photo Top Waxaad u
Wax walba oo ku saabsan Lugood U u Android
Faylal ay ka Nokia wareejiyo Android
Apps Manager on Your Device Android
Sida loo Delete iPhone hayaan
3 Siyaabaha Delete Undeletable faylasha in aanad garanayn About
Sida loo joogto ah masixi Xogta iPad
> Resource > masixi > Sidee si buuxda u masixi SD Card ee Android Phone